Maxamuud Nuur oo dacwad ka furay doorashadii degmadda lixaad -
Maxamuud Nuur ayaa codsaday in dib loo tiriyo dhamaan codadkii la dhiibtay, wuxuuna codsaday in hal hal gacmaha loogu tiriyo dhamaan codadkii la dhiibtay wakhtigii ay doorashadu socotay oo dhan.
Cabdi Warsame ayaa ka guuleystay Maxamuud Nuur iyo Faadumo Yusuf oo iyaddu mataleysay xisbiga Jamhuuriga.
Codsiga iyo dacwada Maxamuud Nuur ayaa imanaya kadib markii Cabdi Warsame uu helay cod dhan 3,629 halka uu Maxamuud Nuur helay 3,390 cod.
Maxamuud ayaa ku andacoonaya in uu isagu ku guuleystay dhamaan xaafadaha ka tirsan degmadda 6-aad ee laga codeeyay, balse guusha doorashada la siiyay Cabdi Warsame.
Sharciga ayaa u ogolaanaya in uu Maxamuud Nuur iyo qof kasta oo musharax doorasho ah uu mudo todobo cisho ah doorashada kadib ay codsan karaan in dib loo tiriyo codadkii
Haddaba Dadweyana degan degmadda lixaad ayaa iyagu dib u doortay Cabdi Warsame oo isagu kursigan soo hayey afartii sanno ee la soo dhaafay, balse Maxamuud Nuur oo looga badiyey codad dhan 223 ayaa ku eedaynaya in Cabdi Warsame uu wax is daba mariyey.
Wixii ku soo kordha doorashada degmadda lixaad iyo codsiga Maxamuud Nuur kala soco Tusmo Times.
Xigashadda sawirka: Minnesota Daily